Xuduudaha heerka Google Earth - oo ku jira tallaabooyinka 3 - Gofumed
Tallaabooyinka xadka ee Google Earth - oo ku jira tallaabooyinka 3
Abriil, 2019 Google Earth / Maps, topografia
Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida loo abuuro dulucyada ku salaysan qaabka dijitaalka Google Earth. Taasna waxaan u isticmaali doonaa plugin for AutoCAD.
Tallaabada 1. Muuji meesha aan dooneyno in aan helno qaabka dijitaalka ah ee Google Earth.
Tallaabada 2. Soo saar qaabka dhijitaalka ah.
Isticmaalida AutoCAD, adigoo haysta Plex.Earth add-ins installed. Mabda 'ahaan, waa inaad bilowdaa kulanka.
Ka dibna waxaan dooranaynaa tabeelaha duurjoogta, ikhtiyaari ah "By GE View", waxay na weydiisan doontaa inaan xaqiijino in dhibcaha 1,304 la keeno; markaas waxay na waydiisan doontaa inaan xaqiijino haddii aan rabno in khadadka laydhka la abuuro. Oo diyaar ahaada; Google ee heerarka heerarka heerarka ee AutoCAD.
Tallaabada 3. Ku dhoofinta Google Earth
Ka dib markii la doortay sheyga, waxaan dooran karnaa KML sawir, ka dibna waxaan tilmaameynaa in qaabka loo bedelay dhulalka iyo ugu dambeyntii in uu ka furo Google Earth.
Halkaasna waxaan haynaa natiijada.
De halkan waxaad ka soo dejisan kartaa faylka kmz oo aan ku adeegsanay tusaalahan.
Halkan ayaad ka soo dejisan kartaa Plex.Earth plugin for AutoCAD.
Post Previous«Previous Horumarinta iyo hirgalinta kiiska BIM - kiisaska bartamaha America
Post Next Waqtiyada Timeshiga - Ku rakib si aad u hesho sawirada taariikhda dayax-gacmeedka leh AutoCADNext »